Biography Ezingokomoya Dr Joseph D’Allende
nentente yokuhlangana, isigubungelo Ezingokomoya
Kungani Sibitwa Ngekutsi Calvary Apostolic Ministries
Vision and Igunya
Uma sihlabela phambili ngo-2016
Lzintshumayelo on Youtube
Ukuhleka Medicine For The Soul
Living Christian Esiwusizo
Ukwelulekwa ngaphambi komshado
The Abrahama Sivumelwane
Yini esesandleni sakho?
WELCOME TO Calvary Apostolic Ministries
Calvary Apostolic Ministries uvusiwe uNkulunkulu uMninimandla onke njengoba Para Senkonzo Church ukuze asize UMZIMBA KAKRESTU in siphelelise abangcwele umsebenzi enkonzweni nangenxa uyakha leNdikimba kaKristu (bheka Efesu 4:12).
Ligunya esizithole iNkosi yethu uJesu Kristu eziyojatshulelwa ngokusebenzisa izincwadi, okulalelwa kubukelwe nalokho yethu Face Book Ikhasi. Kuwumgomo wethu usebenze eceleni amahlelo Church and Local Independent Churches ukwelulwa UMZIMBA KAKRESTU ngakhoke senzé yonke impahla yethu itholakala mahhala. amavidiyo Wethu, izihloko kanye izincwadi kungenzeka bakopisha futhi basakaza nge izimo ezimbili ezinkulu; basuke ngeke adayiswe bese wonke amavidiyo, izihloko kanye izincwadi ukugcina Calvary Apostolic Ministries Logo kanye nekheli. Izindleko Ukulingisa futhi behambisa impahla yethu incurred kungabuyiselwa, kodwa ngezinye ezingenambuyiselo.
Calvary Apostolic Ministries izinkolelo kanye Mission Statement achazwe ukuze kube nobuhlobo obuhle bokusebenzelana nge UMZIMBA KAKRESTU ngakho gcina imfundiso yethu ukuze nezimfundiso zethu ikhono lokukholisa engahlosile ibandlulule nezinye bezinkolo nezimfundiso. Azikho izincwadi sangena ngokuphathelene bezinkolo ezahlukene nezimfundiso.
Siyethemba ukuthi inkonzo kuyoba isibusiso umzimba kaKristu.
izibusiso zikaNkulunkulu ekhethelo isibili
Dr Joseph kanye Dolores D’Allende
Konke okuqukethwe okuhlinzekwe kule site is owned by Calvary Apostolic Ministries futhi iwumsebenzi original of Dr Joseph D'Allende, futhi okumele yenziwe kabusha noma wabelane, kodwa hhayi ukuba ilungiswe noma kuthengiswe nganoma iyiphi indlela ngaphandle kwemvume Dr Joseph D ' Allende. Sicela musa ukufinyelela kule webhusayithi uma ungavumelani migomo nemibandela.
UBIZO LWETHU of Calvary Apostolic Ministries The Church owakhiwa uJesu Kristu nguye uNkulunkulu akumisela imoto ephelele abangcwele umsebenti nangenxa ngukwakha of UMZIMBA KAKRESTU kulo lonke izwe (Mathewu 16:18; Marku 16: 14,15; Efesu 4: 8-13). Ngakho Calvary Apostolic Ministries omiswe uNkulunkulu uMninimandla onke kuyakuba uyokhuthaza ngamandla ngomusa kaNkulunkulu (2 Korinte 12: 9) kanye Amandla kaMoya oNgcwele Read More ...
Sine izihloko kwi website yethu ukuze ulifunde kusuka Dr Joseph D’Allende. Lezi ngokuyinhloko amboze izihloko ezisebusweni amavidiyo ethu okufundisa.
Hambayo Dr Joseph D’Allende: (+64) (9) 4169 942 (Auckland, New Zealand) noma ungasebenzisa ifomu contact ngezansi ukuze usithumelele i-email.
Warning: fopen(/home2/calvary/public_html/zulu/wp-content/plugins/hit-counter/css/.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home2/calvary/public_html/zulu/wp-content/plugins/hit-counter/hc.php on line 216
Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/calvary/public_html/zulu/wp-content/plugins/hit-counter/hc.php on line 217
Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home2/calvary/public_html/zulu/wp-content/plugins/hit-counter/hc.php on line 218